အစစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အစစ်	15
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Nov 10, 2016 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
သူ့ကို လေ သိပ်ချစ်တဲံ့ အကြောင်း . . . တိုးတိုးလေး ပြောပြချင်ပါတယ် . . .
တောတွင်းပျော် says: စာလုံးလေးတွေစီလိုက်တော့ 
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟိုကောင်လေး သင့်အေးရိပ် ကတော့ အဲဒါကို ကဗျာလို့ ပြောမှာ မဟုတ်။
Thint Aye Yeik says: အကယ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြောရင်ရော. . .
၀င့်ပြုံးမြင့် says: mood ၀င်ရင် ကာရံ လွှတ်ချလို့ ရတယ် ဆိုတာ ပြောတာပါ ကိုသူရ။ မု မ၀င်ဘဲနဲ့ နားလည်နိုင်မှ ရမယ်ဆိုပြီး စကားလုံးဘောင်ကို ဖြုတ်ချရမယ်ဆိုတာ မဟုတ်သေးဘူး။ ကဗျာမှာ ဒန်သည် ဖြစ်စေ၊ မဒန်သည်ဖြစ်စေ၊ ရင်ကို ထိရင် ရပြီ။ မုမ၀င်ဘဲနဲ့ ကာရံညီရေးသွားတဲ့ကဗျာတွေ တစ်စက်မှ မကောင်းသလို ကာရံမညီတာတွေကိုလည်း မုမ၀င်ဘဲနဲ့ ဒန်အားကိုးနဲ့ ရေးရင်လည်း ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ် မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီကဗျာကို ကာရံမညီဘူး။ မစစ်ဘူးလို့ စွပ်စွဲရဲလား ကဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမှန်တော့လေ.. ကာရန်ကို အရမ်းချစ်တာ… ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အနော်က ရှေးရိုးစွဲပါတယ်လို့စ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟုတ်တယ် မွန်မွန်။ အဲ ကြောင်နေတာက သင့်အေးရိပ်ဆိုတဲ့ ဘာဘူလေး။ ကာရံပါမှ အသံလှတယ် ဆိုတာ သူက လက်မခံ။ ကဗျာကို စကားလုံးဘောင်ကနေ လွတ်အောင်ရေးရမယ်လို့လည်း ပြောရဲ့။ ပြီးတော့ သူရေးတာကို နားမလည်ရင်လည်း နားမလည်တာသာအပြစ်။ စကားလုံးဘောင်က လွတ်ရမယ်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တော့လည်း စကားလုံးတွေ ဖောင်းကားထွက်။ အဲဒါ သူ့အမြင်ကတ်လို့ အဲဒီကဗျာ ထရေးတာပါ။ မကိုယ်တိုင်လည်း သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ကာရံမပါတာ ကာရံမနိုင်လုိ့ပါ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကာရံမနိုင်တာကို လက်မခံဘဲ အတွေးအဓိကလို့ ပြောချင်တာလေ။ ဒါမယ့် မု ၀င်ရင်တော့ ကာရံ လွှတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို မုဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ရစ်သမ် လိုက်တာပဲ။ ဘာမုမှ မရှိဘဲ ကာရံနောက်ကို အသေလိုက်တော့လည်း ကဗျာက စုတုပြုကြီးဖြစ်ပြီး မကောင်းပြန်ဘူး။ ကဗျာဆိုတာ ငပိ၇ည်နဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်လို။ ၂ခုလုံးပါမှ ကောင်းတာပေါ့။
ညတုန်းက ဟိုဘာဘူလေးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး အဲဒါတင်တာ။ အနားမှာရှိလို့ကတော့ နားရင်းထအုပ်ပြီးပြီ။ ကြားလား ဘာဘူလေး။
ဖိုးသာထူး says: အတော်ဘဲ
အဖေါ်ရှိတုန်း ကာရံလေးတစ်ပုဒ်တင်ဦးမယ် ။
အခုတလောရွာကလည်း ပ်ု့စ်အတော်ရှားနေတော့ ဝင်မဖတ်ဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့ surmi (လူမမှတ်မိမှာစိုးလို့ မိတ်ဆက်တာ)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟယ် ဦးဆာကိုး ။ တကယ်ကို မမှတ်မိခဲ့တာ။ ကာရံလေး တင်ပါနော်။
ဖိုးသာထူး says: တင်လိုက်ပြီ ဒါပေမယ့် . .
ရေးစရာတွေ့လည်း မရေးရဲတော့ဘူး ဟားဟား
Was this answer helpful?LikeDislike 271
သျှားသက်မာန် says: မိုက်တယ်ကွာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မိုက်လား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အချစ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မျှစ်ကြော် ကဗျာကြီးက ဘာမှလည်း မကောင်းဘူး။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ လေးပေါက်။
Anti Moe says: သူ့ကိုလေ
ကာရံနဲ့ဆို “အစစ်” လို မလှတော့ဘူး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟုတ်တယ်နော် ကာရံပါတော့ သိပ်မလှတော့ဘူး။